Female Idol Group Audition | Japan Dream Idol Project (J-DiP)
October 29, 2021	 November 16, 2021
“””တစ်သက်မှာတစ်ခါပဲရတဲ့ မိမိဘဝရဲ့အခွင့်အရေးကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေလုပ်ရင်း ရှင်သန်ကြရ‌အောင်။
“Japan Dream Idol Project”” မှ မြန်မာနိုင်ငံမှရှိတဲ့ အရည်ချင်းရှိပြီး Japanese Style မိန်းကလေးအဖွဲ့တစ်ခု ရဲ့ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ စိတ်ဝင်စားသောသူများကို ရှာဖွေလျက်ရှိပါတယ်။”””
စင်ပေါ်မှာ ဆိုနိုင် ကနိုင်ပြီး မိမိရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် ဒီလိုမျိုး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ချင်ပါသလား?
မိမိကို အားပေးပြီး ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့အတူ မိမိဘဝရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ အခိုက်တန့်တွေကို တူတူမျှဝေနိုင်တဲ့ အခွင့်ရေးရှိမယ့် စမှတ်ပဲဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ ရှင်သန်ခွင့်ရတာမို့ သင်က သီချင်းနှင့်အက ကိုနှစ်သက်ပြီး ထိုအရာများတွင် ထူးချွန်ပါက ဒီအခွင့်ရေးကို လက်မလွှတ်ကြပါနဲ့နော်
အရွေးချယ်ခံရမယ့် ပြိုင်ပွဲဝင်တွေ အတွက် အကျိုးရှိမယ့် အရာတွေကတော့
အရွေးချယ်ခံရတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေက Japan လူမျိုး Idol Producer ရဲ့ အသံ၊သီချင်းနဲ့ အက လေ့ကျင့်ပေးမှုများကို အခမဲ့ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Japan လူမျိုး Idol Producer မှ Project debut လုပ်ဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင် သီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးပေးမှာဖြစ်ပြီး Music Video လည်းရိုက်ကူးခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကတော့ Japan မှာ Live Events တွေမှာ ဖျော်ဖြေခွင့်ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Project မှာ ပါဝင်ဖို့ ဘယ်အရာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့
အသက် ၁၀နှစ်မှ ၂၉အတွင်း၊ မိန်းကလေးဖြစ်ရပါမယ်။
Project ကို ပါဝင်လျှောက်ထားမယ့်သူများက စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရပါ ကျန်းမာရမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော ထုတ်လုပ်ရေး Company များ၊ Entertainment များနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ထားခြင်းမရှိရပါ။
“အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုများကို ဦးစားပေးအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နိုင်မည့်သူဖြစ်ရမည်။တတိယမြောက်ရွေးချယ်မှုအဆင့်တွင်ပြုလုပ်မည့် Camp တွင်ပါဝင်နိုင်မည့်သူဖြစ်ရမည်။ ထို Camp တွင် Youtube program အနေနှင့် နေ့စဥ◌် လှုပ်ရှားမှုများကို ရိုက်ကူးသွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် ထို Youtube program တွင် ပါဝင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
အထက်ပါ ရိုက်ကူးမှုများအတွက် မိဘခွင့်ပြုချက် ရရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အတွေ့အကြုံ မရှိသူများလည်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Application ကို September,15,2021 နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရွေးချယ်မှု အဆင့်ဆင့် ကတော့
ပထမ စကာတင် အဆင့် : လျှောက်လွှာများရွေးချယ် စစ်ဆေးခြင်း
ဒုတိယ စကာတင် အဆင့် (၉လပိုင်း ၂၆ရက်နေ့): လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း
ပထမစကာတင်အဆင့်ကို အောင်မြင်သော လျှောက်ထားသူများကို ဒုတိယ အဆင့်တက်ရန် ဖုန်း သို့မဟုတ် Email မှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအဆင့်အောင်မြင်သော သူများကို နောက်ဆုံးအဆင့်တက်ရန် ဖုန်း သို့မဟုတ် Email မှ တစ်ဆင့် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။
တတိယ စကာတင် အဆင့် (၁၀လပိုင်း ၁ရက်နေ့မှ – ၁၂လပိုင်း ၂၅ရက်နေ့အထိ): နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှု Camp တွင် အဆို၊ အက စသော အမျိုးမျိုးသော အခမဲ့ သင်တန်းများ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ထိုလေ့ကျင့်မှုပုံရိပ်များကို Youtube program အဖြစ် ထုတ်လွှင့်ပြသသွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။
Google Form ကနေတစ်ဆင့် လိုအပ်တဲ့ အချက်လက်များကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီး လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါတယ်
J-DiP Candidate ဖြစ်လာဖို့ ဒီနေရာတွင် လျှောက်ထားလိုက်ပါ
Live your life doing what you love! We are now looking for members of an authentic Japanese-style Female idol group project from Myanmar!
Singing and dancing on stage, captivating the audience with their performance. Would you like to participate in such activities?
There isastarting point where you can make it your life’s work to share the most wonderful experience with your fans who support you. If you love to sing, dance, smile, or stand out, you only have one life to live. You only have one life to live, so why not take the challenge!
（Merit for successful applicants）
Successful applicants will receive free voice and dance training supervised by an experienced Japanese idol producer.
A Japanese idol producer will write an original song for you and produceamusic video with it.
The goal is to perform at live events in Japan.
Age10s-20s / Female only
Applicants must be physically and mentally healthy, and not under contract to any specific entertainment production or label.
Those who can make the main activityapriority ・Those who can attend the camp for the 3rd screening and appear in the YouTube program recorded at the camp ・Minors need parental consent ・Inexperienced applicants are welcome
・1st screening・・・Document screening
・2nd screening (Sep-26th)・・・Practical skills and interview
Only those who pass the first screening will be informed of the second screening by phone or email. Final screening
3rd screening(Oct-1st to Dec-25th)・・・Various free lessons will be held at the final selection camp, and the scenes will be distributed asaYouTube program.
Apply here to become J-DiP Candidate